အက်ကွဲစင်းရာတွေထင်နေတဲ့ဖုန်းScreen ကို အသုံးပြုခြင်းရဲ့ဆိုးကျိုးများ - MyMedia
ဒီနေ့မှာတော့ MyHealth Myanmar ပရိတ်သတ်ကြီအတွက် ပြောပြပေးချင်တာကတော့ အခုခေတ်မှာ လူတိုင်းလိုလို တခေါက်မှ တခေါက် ကြုံဖူးကြတဲ့ ဖုန်းscreenကို မတော်တဆကြောင့်ဖြစ်ဖြစ် လွတ်ကျအက်ကွဲသွားတာ၊ အရာထင်သွားတာမျိုးတွေ ရှိတကြတယ် ဟုတ်? ဒါပေမယ့် ဒါကို တော်ရုံနဲ့ လဲလှယ်တာမျိုးတွေ မလုပ်ပဲ ဆက်သုံးစွဲနေမိတတ်ကြပါတယ်။ လူတိုင်း သတိမထားမိတဲ့ ဒီလိုအက်ကွဲနေတဲ့ ဖုန်း screen ကို အသုံးပြုခြင်းက ဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်လဲဆိုတာကို ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်နော်။
ဖုန်းတွေဟာ radio ကြိမ်နှုန်းဓာတ်ရောင်ခြည်တွေကို ထုတ်လွှတ်ပေးတဲ့အတွက် အဲ့လိုကွဲအက်အရာထင်နေတဲ့ဖုန်းကို သုံးမိလိုက်တဲ့အခါမှာ ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီး ဒီဓာတ်ရောင်ခြည်တွေကို စုပ်ယူလိုက်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ မလိုလားအပ်တဲ့ထိခိုက်မှုတွေနဲ့ ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်ပေါ်လာစေပါတယ်။
အက်ကွဲအရာတွေထင်နေတဲ့ဖုန်းကိုသုံးမိရင်တော့ အနည်းဆုံးတော့ လူတော်တော်များများသိထားတဲ့အတိုင်းပဲ လက်တွေကို ထိခိုက်စေတာပါပဲ။ ဖုန်း screen ကြီး ကွဲအက်နေတဲ့နေရာကို မတော်တဆ လက်နဲ့ထိမိသွားတဲ့အချိန်မှာ ဖုန်းမှန်ကြောင့် လက်ရှတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကွဲအက်အရာထင်နေတဲ့ ဖုန်း screen ကို အမြန်ဆုံး လဲလိုက်သင့်ပါတယ်နော်။
နောက်ထပ် သတိထားရမယ့်အရာတစ်ခုကတော့ မျက်လုံးတွေကို ထိခိုက်စေတာပါပဲ။ သုံးစွဲသူတွေ စိတ်ကျေနပ်စေဖို့အတွက် ဖုန်းတွေမှာ O LED display မျိုးကို အသုံးပြုပေးထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီပုံစံမျိုးက ကွဲအက်နေတဲ့ ဖုန်းတွေအတွက်တော့ ကြည့်ရတာ တကယ့်ကို အဆင်မပြေစေတဲ့အတွက် မျက်လုံးကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ ဒါက မျက်လုံးကို ယားယံတာတွေ မျက်ရည်ထွက်တာတွေ ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက် screen ကွဲနေတဲ့ ဖုန်းကို မသုံးတာ အကောင်းဆုံးပါပဲနော်။
ကဲ.. စာဖတ်ပရိသတ်အနေနဲ့လည်းအက်ကွဲအရာထင်နေတဲ့ ဖုန်း screen ကို ဒီအတိုင်းပဲ သုံးနေမိတာက ဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေရှိနေလဲဆိုတာ သိလိုက်ရပြီဆိုတော့ ဖုန်း screen ကွဲအက်သွားရင် ဒီအတိုင်း ဆက်သုံးမနေပါနဲ့ မြန်မြန်လဲပစ်လိုက်ပါနော်။
The post အက်ကွဲစင်းရာတွေထင်နေတဲ့ဖုန်းScreen ကို အသုံးပြုခြင်းရဲ့ဆိုးကျိုးများ appeared first on MyHealth Myanmar.
MyMedia2020-08-03T19:36:32+06:30August 3rd, 2020|MYHEALTH MYANMAR|